Photoshop hadda waa loo heli karaa Mac-yada leh M1 chip | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | Design Graphic, Photoshop
ka Mac leh jab cusub oo M1 ah ayaa hadda ku xisaabtami kara Adobe Photoshop ka dib markii lagu dhawaaqay waxba kama qabanayso Adobe. Taasina waa xaqiiqda ah inay heli karaan Photoshop oo adeegsanaya qashinka cusub, waxay u horseedaa waxqabad hagaagsan.
Mana ka hadlayno wax hagaajinta, laakiin kaliya 1,5 jeer ka badan marka la barbar dhigo nidaamkan oo leh jiilalkii hore oo leh qaab isku mid ah. Aad baan u hubaa in kuwa haysta Mac leh Apple Silicon ay ogaan doonaan sida loogu qiimeeyo cabirkooda cabirkan cusub ee ka yimid Adobe.
Waxaa ka mid ah riwaayadaha tayada kufiican kuwaan Chips M1 cusub oo leh Adobe Photoshop waxaan ku kalsoonaan karnaa horumar xawaaraha xulashada, miirayaasha iyo waxqabadka heerarka guud.
Taasi waa in la yiraahdo tan iyo maalinta maanta Adobe Photoshop wuxuu si caadi ah ugu shaqeeyaa barnaamijka 'Macs' oo leh 'M1 chip' ugana faa’iideysto si loo kordhiyo waxqabadka. Xawaarahaasi wuxuu u horseedaa 1,5 jeer horumar marka la barbardhigo nidaamyadii hore ee qaabeynta isku midka ah, iyo sida Adobe lafteeda u faallooto, waxay sameysay tijaabooyin furitaanka iyo keydinta feylasha, fulinta filtarrada iyo howlaha xisaabinta degdegga ah sida Mawduuca Ku-saleysan Mawduuca iyo Xul.
Hawlahaasi hadda si dhakhso leh ayey u socdaan iyo xitaa bilowgu waa dhakhso badan yahay. Taas ka sokow waxay gacanta ku hayaan gacanta Apple si loo hagaajiyo waxqabadka hoosta kuwan M1. Xaqiiqdiina Adobe waxay u mahadcelineysaa adeegsadayaasha iyada oo loo marayo Creative Cloud oo ka qeyb qaatay beta-ka Photoshop-ka jajabyadan iyo kuwa ka caawiyay sidaa darteed maanta waxaan dhihi karnaa inay horayba u tahay hooyo.
Dabcan, sheeg in ay jiraan laba shaqooyinka aan wali la hagaajin: casuumaad si wax looga beddelo dukumintiyada daruurta, iyo isku-dubbaridka hore. Haddii aad isticmaasho labadan astaamood, Adobe wuxuu kugula talinayaa inaad dib ugu laabato Photoshop-ka ku yaal Rosetta 2 illaa ay cusbooneysiineyso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Adobe Photoshop wuxuu horeyba ugu jiraa Macs-ka Apple Silicon